Nhau dzeBhaibheri: Nomukadzi Patsime - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Jesu azorora pedyo netsime muSamaria. Vadzidzi vake vandotenga zvokudya mutaundi. Jesu ari kutaura kumukadzi auya kuzochera mvura. Anoti kwaari: 'Ndipeiwo mvura yokunwa.'
Ikoku kunoshamisa kwazvo mukadziyo. Unoziva kuti nei here? Nokuti Jesu muJudha, uye iye muSamaria. Uye vaJudha vazhinjisa havadi vaSamaria. Havangatongotauri kwavari! Asi Jesu anoda marudzi ose avanhu. Saka anoti: 'Dai waiziva kuti ndiani aikukumbira mvura yokunwa, waizomukumbira uye iye aizokupa mvura inopa upenyu.'
'Ishe,' mudzimai anodaro, 'tsime rakadzama, uye hamuna kunyange bhakidhi. Mungawanepiko mvura iyi inopa upenyu?'
Jesu anoti: 'Kana ukanwa mvura inobva mutsime iri uchanzwazve nyota.' 'Asi mvura yandichapa inogona kuita kuti munhu ararame nokusingaperi.'
Mukadzi anoti: 'Ishe, ndipei mvura iyi! Ipapo handichazotongonzwizve nyota. Uye handizofaniri kuuya pano kuzocherazve mvura.'
Mukadzi anofunga kuti Jesu ari kutaura nezvemvura chaiyoiyo. Asi ari kutaura nezvezvokwadi inoreva nezvaMwari noumambo hwake. Zvokwadi iyi yakaita semvura inopa upenyu. Inogona kupa munhu upenyu husingaperi.
Zvino Jesu anoudza mukadzi kuti: 'Indodana murume wako ugodzoka.'
'Handina murume,' anopindura kudaro. 'Wapindura zvakarurama,' Jesu anodaro. 'Asi wakava navarume vashanu, uye murume waunogara naye zvino haaziri murume wako.'
Mukadziyo anoshamiswa, nokuti ikoku kose ichokwadi. Jesu akaziva sei zvinhu izvi? Hungu, nokuti Jesu ndiye Akapikirwa akatumwa naMwari, saka Mwari anomupa mashoko aya.
Panguvana ino vadzidzi vaJesu vanodzoka, uye vanoshamiswa kuti Jesu ari kutaura kumukadzi weSamaria.
Tinodzidzeiko muna ikoku kose? Kunoratidza kuti Jesu anomutsa kuvanhu vamarudzi ose. Saka tinofanirawo kudaro. Hatifaniri kufunga kuti vamwe vanhu vakaipa nokuti bedzi ndevorumwe rudzi. Jesu anoda kuti vanhu vose vazive zvokwadi inotungamirira kuupenyu husingaperi. Nesuwo tinofanira kuda kubetsera vanhu kudzidza zvokwadi.
Johane 4:5-43; 17:3.
Nei Jesu amira pedyo netsime riri muSamaria, uye ari kutii kumukadzi aripo?
Nei mukadzi wacho ashamiswa, Jesu anotii kwaari, uye nei?
Mukadzi wacho anofunga kuti Jesu ari kutaura pamusoro pemvura yorudzii, asi ari kureva mvura ipi chaizvoizvo?
Nei mukadzi wacho ashamiswa nezvinozivikanwa naJesu pamusoro pake, uye akawana sei mashoko aya?
Tingadzidza zvidzidzoi munhoroondo yomukadzi ari patsime?
Verenga Johane 4:5-43.
Tichitevera muenzaniso waJesu, tinofanira kuratidza mafungiro api kuvanhu vemamwe marudzi kana kuti vanobva kwakasiyana nesu? (Joh. 4:9; 1 VaK. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tito 2:11)
Zvikomborero zvipi zvokunamata zvinowanikwa nomunhu anova mudzidzi waJesu? (Joh. 4:14; Isa. 58:11; 2 VaK. 4:16)
Tingaratidza sei kuonga kwakafanana nokuya kwomukadzi wokuSamaria, aida zvikuru kuudza vamwe zvaakanga adzidza? (Joh. 4:7, 28; Mat. 6:33; Ruka 10:40-42)
Kudzidzisa Mukadzi wokuSamariya
Jesu anomuudza chimwe chinhu chaanofanira kunge asati amboudza mumwe munhu.